1.5 tani Chain chitakuriso 2 tani Manual Chain chitakuriso 3 peche Chain chitakuriso - China Foshan Tongyida paakasimudza Equipment
5 tani Manual Chain chitakuriso 3 peche Hand Chain chitakuriso 10 T ...
2 tani Manual Chain chisimudziso chitakuriso 3 tani Manual Chain H ...
Manual Chain Block 1 peche 2 tani vachisimudza Chain Block 1 ...
YOKO Design Chain chisimudziso Block Chain chitakuriso
1ton Chain Block Hardware Tools Ce advertising 1 T ...
Chain chitakuriso 1 tani 3 metres Chain Block itakurwe Cranes
1 tani Hsz Chain Block mamita 3 2 tani Manual Chain Block
1.5 tani Chain chitakuriso 2 tani Manual Chain chitakuriso 3 tani Chain chitakuriso
Product Name: 1.5 tani Chain chitakuriso 2 tani Manual Chain chitakuriso 3 tani
Mutoro Chains: G80 Standard
Nezvikorekedzo: Fully ndokugadzira zvikorekedzo Vari yakanyatsoiswa pamwe Safety Latches
Dynamic Test Load: 1.5 Times Rated Weight
Delivery Detail: 10-25days Pashure The Down Payment
Pashure-Sales Service Akariritira: Overseas Third-Party Support Available
Safety Factor: 4 Nguva Rated Weight
Transport Package: Wooden Case kana makatoni
Specification: capacity: 0.5 tani -20 tani
Origin: China1 tani Chain Block 2 peche Maual Chain Block 3 M
1.5 tani cheni chitakuriso 2 tani Chinyorwa Chain chitakuriso 3 tani cheni chitakuriso
OEM basa inowanika
Test mumwe nomumwe
Sezvo chikamu kambani whollyowned pamusoro Foshan Tongyida paakasimudza Equipment Manufacturing Co., Ltd rakawanikwa muna 2013, Norho ave nyanzvi akagadzira, gadzira uye kugoverwa vachisimudza uye hoisting michina.
Pashure pemakore anopfuura 10 okukura, nhasi tiri mumwe vaitungamirira makambani mumunda yedu, tine 300 tsvimbo nokuti nyanzvi akura kugadzira chikwata, unhu kudzora chikwata, kugadzirwa kwounyanzvi chikwata uye chikwata okutengesa basa.
Weccan kupa zvose zvenyu kusimuka uye zvinhu mukugadzirisa zvinodiwa pa zvikuru makwikwi mitengo. With International ISO Approvals nokuda kwayo unhu mugadziriro uye CE, gs, TUV advertising, Norho Group vanozvikudza kugamuchira kuti kambani yedu uye kutarisira kunzwa kubva kwamuri.
We vanoomerera nheyo "Unhu rokutanga, basa rokutanga, chinoenderera kuvandudzika uye utsanzi kundosangana vatengi" nokuti basa uye "razero rakaremara, razero zvichemo" sezvo unhu chinangwa. Kuti zvakakwana basa redu, tinogona kupa zvigadzirwa pamwe hwakanaka panguva zvine mutengo.
Previous: 1 tani Chain Block 2 tani Chinyorwa Chain Block 3 metres Chain Block ne 1 Year Warranty
YOKO Chain Block Chain chitakuriso Manual
Chain Block 1 peche 3 peche Hand Chain Block
10 tani Chinyorwa Chain chitakuriso 5 tani Chain chitakuriso Tikiko ...
Kito Inokosha Manual Chain takura, 1 tani 2 tani 3 To ...
Manual High Quality Tojo Type Chain Block pamwe Ce
1 tani 2 tani Chain Block 3 peche 5 tani 10 tani 3 Me ...